स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारि’रीक सम्ब’न्धमा तपाईले यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ? – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > स्वर्ग पुगेको महसुस हुने शारि’रीक सम्ब’न्धमा तपाईले यस्तो ट्राई गर्नुभएको छ ?
Bishal May 18, 2022 Uncategorized 0
भारतीय लेखक शिव खेराले भनेका छन, ‘बिजेताहरु फरक कुरा गर्दैनन्, उनीहरु फरक तरिकाले गर्छन् ।’ यो सबैको जीवनमा लागु हुन्छ ।
बेडरूममा मात्रै हुने सम्पर्कका कारण दिक्क मानिरहनु भएको छ भने बाथरूम तपाईंका लागि उचित विकल्प हुन सक्छ ।
हो, तपाईंको घरमा धेरै त्यस्ता ठाउँहरु छन्, जहाँ तपाईं नयाँ तरिकाले आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ ।
घरको बाथरूम पनि एक त्यस्तो ठाउँ हो ।
सबैभन्दा राम्रो आन्नद प्राप्त गर्नको लागि बाथरूम उपयुक्त हुन्छ । यो ठाउँमा गोपनीयता पनि छ, वातावरण पनि रोमान्टिक हुन्छ ।
तर बाथरूममा सम्बन्ध कायम गर्दा कुनै दुर्घटनाबाट बच्नको लागि तपाईंले सावधानी पनि अपनाउनु पर्छ ।
त्यसैले आज हामी बाथरूममा सम्बन्ध राख्दा ख्याल गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका तरिकाबारे चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । सम्बन्धको समयमा बाथरूममा कस्तो प्रकार को सावधानी अपनाउनु पर्छ आउँनुहोस् जानकारी लिउँ स्
किनभने यो पोजिशनमा, पुरुष साथीले आफ्नो खुट्टा क्रस गरेर बस्नु पर्छ र महिला एक खुट्टा पुरुषको काँधमा राख्छिन् र हात भुइँमा आराम गरिरहेका हुन्छन् ।
यस पोजिशनमा आँखासँग सिधा सम्पर्क गरेर, तपाईं एक फरक स्तरसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ । यो पोजिशन गर्दा खुट्टाको मांसपेशिहरुलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्छ ।
यो पोजिशन स्नानको तल बाथटबमा अपनाउन सकिन्छ ।
यो पोजिशनमा, महिलाको एक खुट्टा जमीनमा हुन्छ भने अर्को खुट्टा बाथटब माथि हुन्छ । महिला थोरै अगाडि झुक्नुपर्छ, ताकि सजिलै अगाडि वा पछाडि बाट सबैकुरा पूरा गर्न सकिओस् । जे होस्, त्यहाँ पोजिशनमा चिप्लेर लड्ने डर हुन्छ । त्यसैले केहि सावधानी अपनाउनु पर्छ।
बाथरूममा मुखको प्रयोग धरैले सम्बन्ध पनि निकै रमाइलो हुन्छ ।
यो धेरै रमाईलो र रोमाञ्चक हुन सक्छ । मुखबाट क्रिया बाथरूममा एक राम्रो पोजिशन हो । पोजिशनको यस प्रकारमा, तपाईं शौचालय सीट वा बाथरूम बेन्चको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यसमा, पुरुष वा महिला साथी एक शौचालय सीट वा बेन्चमा बस्न सक्छन्, जबकि अर्को साथी उनको सबैठाउँ मुख प्रयोगका लागि धेरै राम्रो हुन्छ ।
तपाईं यो दुबै पोजिशनमा एक अर्कासँग मुखबाट सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौंमा बालेन साहले लिए यति धेरैकाे अग्रता, पछ्याउँदै स्थापित र सिर्जना
घरको कम्पाउण्डभित्र चिकित्सक मृत भेटिए, ८ जना नियन्त्रणमा